Uma kuqhathaniswa nezinye izihloko eziningi zeRussian Federation, uMkhandlu wase-Ulyanovsk uncane kakhulu. Indawo yayo yonke ingamakhilomitha angu-37 000 kuphela. Kodwa zingaki izinto ezithakazelisayo ezikuyo! Kulesi sihloko sizokutshela ngezinto eziyinhloko zesifunda sase-Ulyanovsk. Phakathi kwazo - izikhumbuzo zemvelo, izakhiwo, izakhiwo zomlando nezamasiko.
Iziqhingi zesifunda sase-Ulyanovsk: isithombe, incazelo kanye nohlu
Eyasungulwa ngo-1943, Isifunda sase-Ulyanovsk sisezindaweni zejometri engxenyeni yaseYurophu yaseRussia. Ipheze ngokulingana nazo zonke izilwandle eziseduze (i-Black, Caspian, White ne-Baltic), okuyinhloko ekunqumeni isimo sezulu kanye nokuhlukile kwendawo yangakini. Iqiniso elibalulekile: ekuchazeni kwalo ndawo kufana nencwadi yaseRussia "G".
Umfula we-Volga uhlukanisa isifunda sibe yizingxenye ezimbili - ibhange elingakwesokudla (ngaphezulu okuphakeme) nebhange elingakwesokunxele. Naphezu kwendawo engabalulekile, izindawo ezintathu zemvelo zingabonwa esifundeni. Enyakatho-ntshonalanga-west-massifs we-taiga, enkabeni - emahlathini-amahlathi, naseningizimu-ntshonalanga - i-classical steppe.
Okukhangayo okuyinhloko esifundeni sase-Ulyanovsk yizinduna zamandulo, ama-Orthodox ethempeli, amamyuziyamu ezithakazelisayo nezikhungo zabasebenzi bomsebenzi. Izikhumbuzo eziningi zokwakha izakhiwo zagcinwa esikhungweni sokuphatha esifundeni. Kunezinhlobo eziningi ezikhangayo zemvelo esifundeni sase-Ulyanovsk. Yiqiniso, ngeke ubone noma yikuphi ukuphakama kwentaba noma ulwandle . Kodwa imvelo yahlawulela ngokugcwele ukungahambi kwabo ngezinye izici eziningi!
Ngakho-ke, yikuphi okukhangayo kwesivakashi se-Ulyanovsk Regional tourist okufanele sivakashele futhi sihlole ngempela? Sinikeza uhlu lwezinto ezinjalo eziyishumi nambili (ezinye zazo zizochazwa ngezansi):
Barrow of "Kamushka".
Ipaki kazwelonke "izintaba ze-Sengileevsky".
I-Krylova Manor edolobheni laseKezmino.
I-Memorial Museum yaseLenin.
Isikhumbuzo sencwadi ethi "e" e-Ulyanovsk.
Boulevard "The Crown".
Museum of raspberries e-Inza.
Kuvela kule ndawo engokwemvelo ukuthi kufanelekile ukuqala ukuchaza izinto eziyinhloko zesifunda sase-Ulyanovsk. Isithombe sepaki kazwelonke evunyelwe ngokusemthethweni ngo-2017 ngeke sikuvumele ukuthi uqambe amanga: lokhu kungenye yezindawo ezinhle kakhulu esifundeni!
Izintaba ze-Sengileevsky zitholakala ngamakhilomitha angu-30 eningizimu yedolobha lase-Ulyanovsk. Ukungafani kwemifino nobuhle bezindawo zendawo kwakunikeza le ndawo igama elithi "Ulyanovsk Switzerland". Lapha, endaweni encane, imvelo idale i-landscape ephathekayo ehlukahlukene. Amagquma aseCretaceous ase-Snow, amaphepho, ama-rocky rocky kanye nama-ledges, amahlathi, amadlelo amahle kanye nezindawo ze-steppes ezinomhlabathi omile angabonakala ngaphakathi kwepaki elilodwa.
Esinye isifundazwe se-landscape se-Ulyanovsk esifundeni se-Undory. Lapha, kusuka ebhange elingakwesokudla le-Volga, ungabona imibono enhle yomfula omkhulu kunawo wonke eYurophu. Ngendlela, kule ndawo ukuthi ifinyelele ububanzi bayo obubanzi - amakhilomitha angu-29! Phakathi kwezinye izinto, idolobha lase-Undory libuye libe yi-resort balneological. Nansi kuphela eRussia insimu yamanzi amaminerali okuthiwa "Naftusya" (afana nokubunjwa kwemithombo yamanzi ama-Truskavets e-Ukraine).
I-Lenin Memorial Museum
UVladimir Ilyich Lenin, umholi wezepolitiki emhlabeni wonke, wazalwa edolobheni laseUlyanovsk. Yiqiniso, iziphathimandla zaseSoviet azikwazanga ukuzinaki leli qiniso. Ngo-1970, i-museum ehloniphekile-isikhumbuzo sasivulwa lapha. Ingxenye eyinhloko yalo yaba yisakhiwo esikhulu. I-museum inezingqikithi ezingaba ngu-100 000 ezihlobene nokuphila noLenin. Izindonga zehholo eliyinhloko lemyuziyamu lihlotshiswe nge-smalt, amapulethi alo ahlanganiswe amashidi amancane egolide.
E-Ulyanovsk, inani elithile lezakhiwo zomlando eziyigugu futhi elihle liye lagcinwa. Iningi lalezi zikhumbuzo zokwakha ziseBoulevard "Crown". Lezi zindawo zakudala zedolobha, izindlu, izakhiwo zomphakathi. I-Boulevard iyindawo eyintandokazi yokuhamba kokubili izivakashi nabahlali bendawo. Lapha ungabona futhi izikhumbuzo eziningi ezithakazelisayo nezihlekisayo ze-sculptural. Njengokuthi, isibonelo, isikhumbuzo esidumile sencwadi ethi "e".
Isikhumbuzo esiyingqayizivele sesakhiwo sisezindaweni saseKhanadi Nikolaevsky. Kuyimbhoshongo engaqondakaliyo futhi ehlukumezekile ngamamitha angu-20 phezulu, kusukela emlandweni wezazi zekhulu le-17. Kuze kube manje, aziwa ukuthi ngubani nokuthi kungani lakhiwa. Ngokusho kososayensi bendawo, lokhu kungenye yezakhiwo zomugqa wePenza-Syzran ovikelayo.
Amatshe asePastukhov: incazelo
Kuphi eMoscow ukuhamba nomntwana: ukukhethwa kwezindawo ezithakazelisayo
Perm izinwele isikhathi eside. Yesikhathi eside izinwele isitayela: izici, intengo
Moschino amakha etholakalayo ngamunye
Ufuna ubizo: ubuchwepheshe ezihlobene emkhakheni wesayensi yokuthakwa kwamakhemikhali
Kungani isidingo imodi yefoni azimele wodwa?
Indlela ukukhetha ijazi mink ezitolo
Umsebenzi wokukhokha wenkolo: incazelo, izici